Allbenaadir » XOG:-Cristiano Ronaldo Vs Lionel Messi- Midkee Noqon Doona Gool Dhaliyaha Kabta Dahabka Ah Ee SHANAAD Ku Guulaysan Doona? Iyo Dagaalka Aan Dhamaadka Lahayn Oo Wali Sii Socda.
XOG:-Cristiano Ronaldo Vs Lionel Messi- Midkee Noqon Doona Gool Dhaliyaha Kabta Dahabka Ah Ee SHANAAD Ku Guulaysan Doona? Iyo Dagaalka Aan Dhamaadka Lahayn Oo Wali Sii Socda.
November 25, 2017 - Written by admin - Edited byadmin
Xidiga qaranka Argentina iyo kooxda Barcelona ee Lionel Messi ayaa maanta la gudoonsiiyay abaal marint gool dhalinta horyaalada Yurub ee Golden Boot kadib markii uu xili ciyaareedkii hore noqday ciyaartoygii dhibcaha ugu badan ka helay horyaalada Yurub isaga oo 37 gool ka soo dhaliyay 34 kulan oo uu horyaalka La Liga ka soo muuqday, wuxuuna Messi hantiyay kabtiisii afraad ee dahab ah isaga oo barbareeyay xidiga ay markasta abaal marinaah shaqsiga ah ku loolamaan ee Cristiano Ronaldo.
Ma jiro ciyaartoy ku soo dhaw Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi ee ku guulaysiga kabta dahabka ah ee gool dhalinta yurub wuxuuna mid kastaaba haystaa afar kabood oo dahab ah laakiin waxaa lays waydiinayaa miyuu mid ka mid ahi xili ciyaareedkan ku guulaysan doonaa kabta dahabka ah ee Yurub markiisii shanaad?.
Sida hadda u taagan tahay waxay u muuqataa in Cristiano Ronaldo ay ku qadkaan doonto in uu ku guulaysto kabta dahbaka ah markii shanaad iyada oo ay jiraan laba sababood oo aad wayni. Ugu horayn xidiga ree Portugal waxa uu haystaa hal gool oo kaliya iyada oo horyaalka La Liga la soo ciyaaray 12 kulan, waxayna sababta labaad tahay ciyaartoyda loolanka ku jira iyo goolasha badan ee ay ka horeeyaan.
Xili ciyaareedkii hore Lionel Messi ayaa xidigo ay ka mid yihiin Edinson Cavani iyo Luis Suarez kaga guulaystay kabta dahabka ah laakiin xili ciyaareedkii hore horyaalka France waxaa halka gool lagu qiimaynayay 1.5 dhibic laakiin xili ciyaareedkan waxaa lagu qiimaynayaa halkii goolba 2 dhibcood si la mid ah horyaalka La Liga, Serie A iyo Premier Leaque taas oo la micno ah in ciyaartoyda horyaalka France ay xili ciyaareedkan fursad wayn haystaan.
Lionel Messi ayaa ilaa hadda 12 gool ka haysta horyaalka La Liga kadib markii la soo ciyaaray 12 gool, wuxuuna si cad uga mid yahay xidigaha ilaa hadda u muuqda kuwa ugu cad cad ee kabta dahabka ah ee gool dhalinta Yurub ku guulaysan kara waxaana ka horeeya Ciro Immobile oo wacdaro layaableh ka dhigaya kooxda Lazio iyo Edinson Cavani oo qaab ciyaareed fiican kaga jira PSG waxayna haystaan min 15 gool oo horyaalada ay ka tirsan yihiin ah.
Crisitano Ronaldo ayaa labadii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay ku soo guulaysan kabta dahabka ah laakiin waxa uu hore ugu soo guulaystay xili ciyaareedkii 2007/08 markaas oo uu 31gool ka soo dhaliyay horyaalka Premier Leaque isaga oo ka tirsanaa Manchester United waana markii ugu horaysay ee uu kabta dahabka ah ku soo guulaystay.
Laakiin xidiga ree Porutgal ayaa xili ciyaareedkii 2010/11 waxa uu horayalka La Liga ka soo dhaliyay 40 gool isaga oo markii labaad hantay kabta dahabka ah laakiin xili ciyaareedkii 2013/14 Cristiano Roanldo iyo Luis Suarez ayaa ku wada guulaystay kabta dahabka ah ee Golden Boot kadib markii uu Ronaldo 31 gool u dhaliyay Real Madrid isla markaana uu Luis Suarez 31 gool u dhaliyay Liverpool.
Markii ugu danbaysay ee uu Ronaldo gacanta ku dhigay Golden Boot waxay ahayd xili ciyaareedkii 2014/15 markaas oo uu 48 gool ka dhaliyay horyaalka La Liga wuxuuna sidaa ku haystaa 4 kabood oo dahab ah ee uu ugu soo guulaystay gool dhalinta Yurub.
Lionel Messi ayaa markii ugu horaysay kabta dahabka ah ee gool dhalinta Yurub soo qaaday xili ciyaareedkii 2009/10 kii markaas oo uu 34 gool ka dhaliyay horyaalka La Liga laakiin xili ciyaareedkii 2011/2012 kii waxa uu dhigay rekoodhka ilaa hadda aan la helin ciyaartoy ka gaadha horyaalka La Liga isaga oo Messi markaas oo dhaliyay 50 gool oo horyaala La Liga ah wuxuuna qaatay kabtiisii labaad ee dahabka ahayd.
2012/13 Lionel Messi ayaa xili ciyaareedkii labaad oo xidhiidh ah ku guulaystay Golden Boot kadib markii uu horyaalka La Liga ka dhaliyay 46 gool wuxuuna markan gumoomay abaal marintiisii saddexaad ee kabta dahabka ah waxaana ugu xigtay kabta dahabka ah ee jimichii la gudoonsiiyay oo uu ku soo guulaystay xili ciyaareedkii 2016/17 oo uu horyaalka Spain ka soo dhaliyay 37 gool.
Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa tobankii sano ee ugu danbeeyay soo gaadhay gool dhalin ayna macquul ahayn in si sahlan uu ciyaartoy kale ku gaadhi karo iyaga oo kala haysta in Messi uu hal xili ciyaareed horyaalka La Liga ka soo dhaliyay 50 gool halka Ronaldo uu isna 48 gool ka soo dhaliyay hal xili ciyaareed.
Xili ciyaareedkii hore Ronaldo waxa uu horyaalka La Liga ka dhaliyay 25 gool laakiin marka la qiimeeyo heerka gool dhalintiisa xili ciyaareedkan waxay u muuqataa in uu ka hoosayn doono xili ciyaareedkii hore haddii aanu gabi ahaanba badalin qaabka darbo gool u badalkiisa uu hadda kaga jiro La Liga.
Bilo badan ayaa wali horyaalka La Liga ka hadhsan wuxuuna dhamaan doonaa bisha May 2018 taas oo sabab u noqon karta in wax walba ay isbadali karaan laakiin sida la saadaalinayo Lionel Messi ayaa gool dhalintiisii xili ciyaareedkii hore ee 37 ahayd ee La liga ka sare mari kara haddii sida la qiimaynayo uu ku socdo in celcelis ahaan uu kuankiiba 1 gool ka dhalinayo.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la arki doonaa Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo midka markii shanaad ku guulaysan kara kabta dahabka ah ee gool dhalinta horyaalada Yurub iyaga oo hadda barbaro ku ah min 4 jeer oo ay soo qaadeen